मर्जर र एक्विजिसनको कारण सर्वसाधारणको २६ अर्ब बन्धक :: जुना श्रेष्ठ :: Setopati
मर्जर र एक्विजिसनको कारण सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताहरूको २६ अर्ब बराबारको सम्पति बन्धक बनेको छ। मर्जर र एक्विजिसनले गर्दा १० वटा कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का छ। यो चलनले लामो समयसम्म आफ्नो सम्पत्ति बन्धक भइरहेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेका छन्।
'मर्जर र एक्विजिसनमा लगानीकर्ताहरूको साथ सधैं मिलेको छ। तर सबैभन्दा बढी पिडा र अन्यायमा पनि उनीहरू नै परिरहेका छन्,' नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौड्यलले भने।
हुनपनि कतिपय कम्पनीमा अढाई वर्षदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी फसिरहेको छ। उदारहणकै रूपमा आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत २०७६ पुस ३ गतेदेखि सेयर कारोबार रोक्का गरिएको छ।
अन्तिम कारोबार प्रतिकित्ता चार सय ६५ रुपैयाँमा भएको यस कम्पनीमा सर्वसाधारणको १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ फसिरहेको छ। १० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीमा सर्वसाधरणको ४० प्रतिशत लगानी छ।
मर्जर र एक्विजिसनको क्रममा त्यसले पूर्णता नपाउँदै कारोबार खुल्ला गरिँदा यसैको नाममा चलखेल हुने भन्दै यो अवधिमा कम्पनीहरूको कारोबार रोक्ने चलन बनेको हो। राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी विनियमावली २०७३ मा यो प्रक्रिया चल्दा कारोबार रोक्का राख्ने व्यवस्था छ।
'राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्तीसम्बन्धी विनियमावलीमा यो प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको सेयर रोक्का राख्ने व्यवस्था छ,' नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली भन्छन्, 'अहिले मर्जरमा जाने संस्थाहरूले नियामक निकायका पत्रसहित कारोबार रोक्न पत्रचार गरेपछि हामीले कारोबार रोक्ने गरेका छौं।'
दुई वा सोभन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आ-आफ्नो साधारण सभाको विशेष प्रस्ताव बमोजिम आ–आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडबाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको पत्र सहित सैद्धान्तिक सहमतिसहित राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। तर राष्ट्र बैंकको दायरामा नआएका कम्पनीहरूको पनि कारोबार रोक्का भएकोमा लगानीकर्ताहरूले त्यसको कारणसहित नीतिगत आधार माग गरेका छन्।
'सेयरको बजार मूल्यका आधारमा नभई कम्पनीको लेखा परीक्षणले देखाउने वित्तीय अवस्थाका आधारमा कम्पनीको मर्जर हुन्छ। तर पनि मर्जर सम्झौता गरेका कम्पनीको सेयर कारोबार किन रोकिन्छ?,' सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टाराई प्रतिप्रश्न गर्छन्, 'कम्पनीको सेयर कारोबार सुचारु गर्न नेप्से र धितोपत्र बोर्डले यतिका वर्ष के अध्ययन गरेका छन् तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ।'
लगानीकर्ताहरूले सेयर रोक्का रहँदाको समस्या फेसबुकमा यसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्:
समस्यामा लाखौं लगानीकर्ताहरू
अम्बिका प्रसाद पौड्यल, पूर्व अध्यक्ष नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम
रोक्नु, छेक्नु, बाँध्नु अनि कुट्नु मात्र समस्याको समाधान होइन। सबै समस्याको सहज निराकरण छ। सरकारको नीति बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको अहिलेको संख्या घटाउने रहेको र सो नीतिलाई सकेसम्म सहयोग गर्ने मनसायले धेरै संस्था गाभिने तथा प्राप्ती गएका छन्। यसमा सबै लगानीकर्ताको सधै साथ र सहयोग गरिरहँदा अहिले सबैभन्दा बढी पिडा र अन्यायमा लगानीकर्ताहरू परिरहेका छन्। केही यथार्थता घटना र त्यसबाट परेको असरलाई सेयर रोक्का गर्ने निकाय नेपाल स्टक एकसचेन्ज, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, विद्युत नियमन आयोगले जवाफ दिनु पर्दैन र?
घटना नं १. एउटा सामान्य व्यक्तिले आफूसँग रहेको सानो बचतबाट हिमालयन बैंकको सेयर खरिद गर्‍यो। उसलाई यो थाहा थियो कि सेयरको लगानी चाहेको समयमा बिक्री गरेर नगद पाउन सकिन्छ। अहिले निक्षेप खातामा राखि रहनु भन्दा सेयर खरिद गर्छु। सोही अनुसार उसले आफ्नो बचत रकमले सेयर खरिद गरेको आज एक वर्ष बढी भयो। तर त्यो सेयर रोक्का रहेको छ। यो बीचमा उसलाई पैसाको आवस्यकता पर्‍यो त्यो बाहेक अरू सम्पती छैन वा उसको परिवारको उपचार गर्न रकम चाहिएको छ, सामाजिक कार्यको लागि पैसा चाहिएको छ, छोरीको विद्यालय शुल्क तिर्न विद्यालयले ताकेता गरेको छ भने उसले अब कसरी नगद जुटाउने? त्यही सेयर धितो राखी कर्जा लिन पनि समस्या छ। यस्ता समस्या लाखौं लगानीकर्ताका छन्। यसलाई कस्ले सम्बोधन गर्ने अनि यी पीडितलाई कस्ले क्षतिपूर्ति दिने?
घटना नं २. अहिले एकल ग्राहकले एउटा बैंकबाट अधिकतम ४ करोड कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। मानौं गत वर्ष जेठमा हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनबि बैंक, रैराङ हाइड्रो, गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफ एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लगायत कम्पनी धितो राखी कुनै व्यक्तिले १० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको भए अब उसले राष्ट्र बैंकले भने जसरी यही असार भित्र यसलाई ४ करोडको सिमामा कसरी ल्याउने? आज ती मध्येका अधिकांस सेयर रोक्का छन भने मूल्य घटेर आधा भएको छ। बिक्री गरौं आफूसँग भएका सेयर रोक्का छन्। नगरौं बैंकको खराब सूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ। ऊसँग कर्जा तिर्ने पनि इच्छा छ, सम्पति पनि छ तर विकल्प विहिन छ। नियामकले यसरी विकल्प हिन बनाएर लगानीकर्तालाई विस्थापित गर्न मिल्छ?
धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सेयर कारोबार किन रोक्छन?
रविन्द्र भट्टराई, सेयर विश्लेषक
सेयरको बजार मूल्यका आधारमा नभई कम्पनीको लेखा परीक्षणले देखाउने वित्तीय अवस्थाका आधारमा कम्पनीको मर्जर हुन्छ। तर पनि मर्जर सम्झौता गरेका कम्पनीको सेयर कारोबार किन रोकिन्छ? सेयरको मूल्य बढेर वा घटेर त्यसले कम्पनीको नाफा नोक्सान वा उसको नेटवर्थमा कही कतै पनि असर गर्दैन।
तर पनि धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सेयर कारोबार किन रोक्छन्? मर्जर सम्झौता गरेका कम्पनीको सेयर कारोबार पुनः सुरू गर्न नेप्से र धितोपत्र बोर्डले यतिका वर्ष के अध्ययन गरेका छन् तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कारोबार रोक्नु समाधान हो वा समस्या धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष र नेप्सेको जिमले तत्काल जवाफ दिनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ६, २०७९, ०४:४२:००